जीवनको यात्रा,(शिव प्रकाश)
गीत के हो भन्नु पर्दा मेरो व्यक्तिगत धारणमा साहित्य सिर्जनाका विधाहरु मध्ये कोमलता र भावुकताभित्र मूलतः प्रेम प्रणय र पीडा अभिव्यक्त गर्ने प्राणको लय बोकेको छोटो विधा नै गीत हो । गीतमा प्राण अर्थात बोली र लयको संयोजन हुने हुँदा नै गीत सधै जीवन्त र कालजयी हुने गरेको छ । गीतका भाषाले जहिले पनि गेयपक्ष र लयलाई आत्मसात गरेको हुनु पर्छ । यस्ता गीत नै शाश्वत र कालजयी हुने गर्छन । यसका अलावा गीत देश समाज परिस्थिति रहनसहन लगायत अन्य खास विषय वस्तुमा पनि रचिन्छ । साहित्यभित्र पनि दुई धारहरु छन्- रचना र निर्माण । <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
यी दुई मध्ये गीत रचना नै हो । गीतले गेय र लयलाई पूर्णरुपले आत्मसात गरेको हुनु पर्छ । नत्र त्यो निर्माण हुन जान्छ । आज साहित्यका हरेका विधामा नयाँ प्रयोगहरु आइरहेका छन् तर नयाँ प्रयोगका लागि पुरानोको आधार भत्कियो भने त्यो न त रचना नै हुन सक्छ न त निमार्ण नै । गीत रचनाको पक्षलाई सरसर्री हेर्दा सजिलो लागे पनि गीतीय धर्म र मर्म अनुरुप गीत रचना कठिना सृजनाशिल्प कार्यभित्र पर्छ । गीत गेयात्मक हुनु पर्छ भन्ने मान्यतालाई कुनै पनि गीत सर्जकले भत्काउनु हुदैन भन्ने मेरो पनि मान्यता छ । यदि भत्कायो भने त्यो गीत हुदैन मात्र एउटा टिपोट हुन्छ भन्ने मान्यतालाई सर्जकले स्विकार्नु पर्ने हुन्छ ।
यिनै कठिनता अप्ठ्यारा र साह्रागाह्राहरुसँग जुध्दै विनोद रोका जीवनको यात्रा गीत संग्रह लिएर आएका छन् । अमेरिकामा पेशले उनको पर्याय कानून व्यवसायी भए पनि र भावनाले नेपाली साहित्यप्रेमी हो । सन् १९९८ मा अमेरिका भासिएका रोकाले संग्रहमा मुद्रित आफ्नो मन्तव्यमा भनेका छन् "प्रस्तुत गीति संग्रह मेरो पहिलो कृति हो । कानून पेशामा संलग्नरत व्यक्तिवारे लेखिएका गीतहरुमा भाषा र साहित्यको अल्पज्ञानको कारणले गर्दा निश्चय नै केही कमी कमजोरी छन् । अतः तपाइँ विज्ञ पाठकहरुले त्रुटी औल्याइदिनु हुने छ भन्ने आशा एवं विश्वास लिएको छु ।" उनको यो लेखकीय उदारताले उनी गीत लेखनमा गीतिय धर्म मर्म र मान्यतालाई पालन गर्न सधैं प्रयाशरत छन् भन्ने स्पष्ट पारेको छ ।
म उनका यिनै भनाइको आधारभूमिमा उभिएर एक पाठकको नाताले जीवनको यात्रा नियाल्दै छु । प्रस्तुत गीत संग्रहमा मानविय जीवनमा आउने आइरहने र भोगिने कष्ट दुःख पीर व्यथाका प्रस्तुति प्रसस्त छन् अनि कता कता मान्छे विशेषमा छाउने खुसीहरु गीत बनेर आएका छन् ।
मानिसले मानिस भएर गर्न नहुने तर गर्ने र गरिरहने घात-प्रतिघात धोका कपट छलछामहरु जीवनका भोगाइ भएर गीतमा उत्रिएका छन् । माता र मातृभूमि अर्थात गीतकार रोकाको भाषामा आमा र मातृभूमिबाट गीतयात्रालाई शुरु गरेर रोकाले एस सय पाचौं कोसेलीका रुपमा संग्रहलाई कस्तो साथी रोजे मैलेमा ल्याएर पूर्णविराम दिएका छन् । यसमा मान्छेभित्रको दम्भलाई उनले यसरी उतारेका छन् -
कस्तो साथी मैले रोजे कुरै नमिल्ने
उसले भने कहिले पनि हार्नै नमिल्ने !
मानवीय चेतनाको एक सानो अंशमात्र भएको कुन मान्छेलाई आफू जन्मे र हुर्केको ठाउँ प्यारो हुदैन र उनी अमेरिका बसे पनि आँखाभरि तिनै आफ्ना हिमाल देख्छन गाउँघर र पाखापखेरा देख्छन् । सम्झनाका तरेलीहरुमा खेलिरहन्छन अनि जीवनले थाहै नपाई लिएको मोड नियाल्दै लेख्छन् -
थाहा थिएन जिन्दगी यसरी मोडिएला
जन्मे हुर्केको ठाउँ चटक्कै छोडिएला ।
घरदेश छोडेर परदेशीनुको पीडा गीतमा जताततै झल्किएका छन् । परिवाजनका सदस्य परदेशीदा पर्ने पीडाबोधलाई उनले राम्ररी बुझेका छन् ।
अगेनामा आज आगो भर्मरायो
पधेँरामा जाँदा देब्रे आँखा फर्फरायो ।
परदेशमा हुन सक्ने विग्रहले आफन्तलाई कति चिन्तित बनाउँछ गीतमा बोल्छन् रोका । जीवन रहुन्जेल जीवन सधैं लडी नै रहेको हुन्छ- हारजितको खेलमा ! सबै खेल जित्न भन्दा हार्न सजिलो हुने र हारेपछि जित्न सजिलो हुने भन्दै जीवनको यथार्थतालाई आत्मसात गर्छन् ।
मैले लडेपछि उठ्न जाने
हारेपछि जित्न थाले ।
भाषागत शुद्धतामा त्यति ध्यान दिन नसकिए पनि केही गीतका भाव र बान्की राम्रा छन् ।
धेरै जसो गीतमा प्रेम र प्रणयभाव झल्किएका छन् । संग्रहभित्र रहेका गीत मध्ये यो गीतले काव्यिक ओज बोकेको छ । निक्कै गहन छ भावपक्ष ।
रस लियो भमराले मलजल गर्ने तिमी भयौ
हाँसो लिने अरु भए आँशु पुछ्ने तिमी भयौ ।
गतिमा कविता र मुक्तकका वान्की र भाकाहरु पनि प्रसस्त भेटिन्छन् । यिनले गीतशिल्पीको निखारमा कताकति कसर पैदा गरेजस्तो पनि देखिन्छ । संग्रहमा सबैभन्दा खड्किने पक्ष शुभकामना मन्तव्यहरु रहेका छन् । संग्रहमा छापिएका बग्रेल्ती शुभकामनाले हल्काफुल्का स्मारिकाको झझल्को पनि दिन्छ । यति मात्र हैन संग्रहमाथि अन्याय नै भएको छ । सायद अनुभवको कमीले पनि प्रकाशकीयको यो पक्ष कमजोर भएको हुनु पर्छ । संग्रहको आवरणले पनि न्याय पाएको छैन ।
मार्च १४ २०१५ ।